Mpanamboatra fonosana tilikambo plastika - orinasa mpamokatra fonosana sy mpamatsy tilikambo plastika China
Fonosana Random Rosette Rings
Plastika Teller Rosette Ring no AJTeller voalohany nataon'i Etazonia tamin'ny 1954 noho ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ary matetika no antsoina koa hoe fehezam-boninkazo Taylor (Teller Rosette). Ity filler ity dia misy peratra maro miforona manodidina ny fatotra, satria ny sampan-draharaha dia afaka mameno ny banga ho an'ny fikojakojana ranon-javatra avo kokoa, ny tsanganana tsiranoka dia afaka mijanona ela kokoa, ka mampitombo ny fotoana fifandraisan-tsolika amin'ny dingana roa, manatsara ny fahombiazan'ny entana. famindrana. Fonosana polypropylene miaraka amin'ny porosity, ary fihenan'ny tsindry ary haavon'ny haavon'ny famindrana faobe, ny tampon'ny teboka, ny fifandraisan'ny etona miaraka amin'ny feno, ny ampahany amin'ny fahombiazana kely sy avo lenta ary ny masobe dia ampiasaina amin'ny fikosehana gazy, tilikambo fanadiovana.
Ny plastika Intalox Plastika dia vita amin'ny plastika mahatohitra hafanana sy harafesina simika, ao anatin'izany ny polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl chloride polyida (CPVC) ary fluoride polyvinylidene (PVDF). Izy io dia manana endri-javatra toy ny habaka habaka lehibe, fidinan'ny tsindry ambany, haavon'ny haavon'ny famindrana betsaka, haavon'ny tondra-drano avo, fifandraisan-dranon-tsolika mitovy, hery misintona kely, fahombiazan'ny famindrana betsaka ary sns, ary ny mari-pana fampiharana amin'ny haino aman-jery dia manomboka amin'ny 60 hatramin'ny 280 ℃. Noho ireo antony ireo dia ampiasaina be dia be amin'ny tilikambo fonosana amin'ny indostria solika, indostrian'ny simika, indostria alkali-klorida, indostrian'ny entona arintany ary fiarovana ny tontolo iainana, sns.
Ny fonosana PTFE Pall Ring dia manana flux lehibe, fanoherana kely, fahombiazan'ny fisarahana avo lenta ary fahalemen'ny asa.
Talohan'ny namoronana ny endrika fonosana tilikambo nataon'i Frederick Raschig tamin'ny taona 1914, ny peratra Raschig plastika no vokatra vao haingana novolavolaina tamin'ny famonosana kisendrasendra. Ny Rachig Ring amin'ny plastika dia manana endrika tsotra mitovy halavana amin'ny savaivony sy ny hahavony. Izy io dia manome faritra midadasika ao anatin'ny haben'ny tsanganana mba hifaneraserana amin'ny ranoka sy entona na etona.
Ny fonosana PTFE Raschig Ring dia manana flux lehibe, fanoherana kely, fahombiazan'ny fisarahana avo lenta ary fahalemen'ny asa.
Ny fonosana tampoka Zhongtai Tri-pak, izay mitovy amin'ny fonosana lava poakaty polyhedral, dia manome fifandraisana ambony indrindra eo anelanelan'ny entona sy ilay ranoka fanosotra amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fananganana vongan-drano mitete eo am-pandriana feno fonosana. Izany dia miteraka fahombiazan'ny fanosotra avo lenta, ary mampihena ny halalin'ny fonosana takiana. Izy io koa dia afaka misoroka ny fanakanana, satria tsy misy faritra fisaka hipetrahana partikaly. Ny fonosana tilikambo Tri-pak dia manala ny puddling koa. Satria tsy misy zorony sy lohasaha, ary mampihena ny ranon-javatra mando dia mikoriana midina ambonin'ny rindrina. Ny Tri-pak dia misoroka bebe kokoa ny teboka maina sy ny fametahana ny tsindrona, trangan-javatra roa fahita amin'ny fampitam-baovao mahazatra. Ireo fepetra roa ireo dia miteraka fandefasana rano sy rivotra ary mampihena ny fahombiazan'ny haino aman-jery.
Ny bolongana mitsingevana plastika dia manampy amin'ny fifehezana ny fahaverezan'ny hafanana, ny etona ary manampy amin'ny fifehezana ny fofona sy ny zavona. Ny Hollow Balls dia ampiasaina ho toy ny baolina valizy amin'ny fampiharana fanaraha-maso koa.
Ball hollow Floating Ball dia vita amin'ny plastika mahatohitra hafanana sy harafesin'ny simika. Izy io dia manana endri-javatra toy ny habetsahan'ny avo lenta, ny fihenan'ny tsindry ambany, ny haavon'ny haavon'ny famindrana faobe, ny tondra-drano avo lenta, ny fifandraisan-tsolika amin'ny solika, ny hery misintona kely, ny fahombiazan'ny famindrana betsaka ary ny sisa, ary ny mari-pana fampiharana amin'ny haino aman-jery dia manomboka amin'ny 60 ka hatramin'ny 150. Noho ireo antony ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny tilikambo fonosana amin'ny indostria solika, indostrian'ny simika, indostria alkali-Chloride, indostrian'ny entona arintany ary fiarovana ny tontolo iainana, sns.
Ny plastika misidina amin'ny rano misy plastika dia mampiavaka ny barycenter marin-toerana, toerana ambony eo anilany, ary fahombiazana mandrakotra. Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny tanky rano miangona sy sira manala ny fitoeran-drano amin'ny fitsaboana rano.
Ataovy amina habetsaky ny isam-paritry ny velaran'ny rano na ny rano, dia hiparitaka sy hizara amin'ny fomba milamina ny baolina ary hanarona ny velaran'ny faritra, ary hasiana tombo-kase ny fefy amin'ny tombo-kase.